Tamaam E-service waa Shirkad Ganacsi si gaadha ah loo leeyahay xarunteedu tahay Hargeysa, shaqadeeduna tahay adeegyada kala ah Taxi,Cunada oo macaamiisha xaafada loogu geeyo iyo farsamada gacanta, waxaana la asaasay 2019.
Ujeedooyinka ugu weyn ee shirkada loo aas aasay ayaa ah sahlida in si online ah aad u dalban karto Taxi iyo in cuno laguugu keeno gurigaada. Shirkada waxa ey macaamiisheeda u sahleysaa in fadhigooda loogu adeego.
Tamaam E-service waxa uu sahalayaa in hadii aad u baahatid farsama yaqaan, in si sahal ah aad uga dalban kartit mobile-kaada.
Tamaam E-service waxay lee dahay dhaqan si qoto dheer uga dhisan Dhinacyada Aqoonta, Farsamada, taas oo aan uga go leenahay inaan helno Kalsoonida Macmiishu nagu qabaan maalin kasta, si aan u gaadhno hadafkeena dheer oo ah inaan samyno Ganacsi ku qotama Masuuliyada ta u saraysa ee la siiyo Macmiil.
iyo adeegya kala oo badna oon dib kaga soo dari doona system-ka
In eynu sahalno dhamaan adeegyada kala ah Taxi,Cunada oo xafada loogu geeyo macaamiisha iyo farsamada gacanta.
In eynu gaadhno dhamaan geeska africa oo adeega Tamaam E-Service noqdo mid laga wada isticmaalo.
Ahdaafta shirkada TamaamPay:
Waa in eynu ugu adeegnaa macaamiilka gurigiisa.
Fududeynta farsamada gacanta.
Dhaqanka Tamaam E-service
Waxay lee dahay Shirkadda Tamaam E-service dhaqan & Dabeecad ay ka ga duwan tahay Shirkadaha kale ee dhigeeda ah, taas oo u ah astaan u gaar ah oo lagu yaqaan, oo kala ah:
Shaqaalle Xirfadyahano oo leh Tababar aad u sareeya.
Wada shaqeyn dhow.
Daacad & Dhawrsanaan.
Hal Abuur & Furfuranashiyo maskaxeed.
Dhagaysi & Tix galin.
Shaqo ku adkaan (Commitment)
App-ka shirkada tamaam kala soo dag.
Tamaam Macaamiil app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tamaamtaxi.macaamiil
Tamaam Darawal app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tamaamtaxi.darawal
Tamaam Store app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tamaamfood.delivery
Tamaam Macaamiil app: https://apps.apple.com/us/app/tamaam-macamiil/id1471088281?ls=1
Tamaam Darawal app: https://apps.apple.com/us/app/tamaam-e-services/id1471087058?ls=1
Tamaam Darawal app: https://apps.apple.com/us/app/tamaam-delivery/id1471088449?ls=1
Togdheer, Ka soo horjeedka Masjid-ka Ibrahim,
© Copyright 2019 @tamaam